एक पुनर्विक्रेता हुनुहोस् - जिंहुआ एक्बमेकर टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड
थ्रीडी प्रिन्टि technology टेक्नोलोजीको विकासको साथ, थ्रीडी प्रिन्टर अनुप्रयोगहरू दैनिक जीवनमा अधिक र अधिक लोकप्रिय छन्। यो नयाँ अवसरमा पैसा कमाउने र आफ्नो क्यारियर निर्माण गर्ने ठूलो अवसर जस्तो देखिन्छ। थ्रीडी प्रिन्टिंग मार्केटमा प्रारम्भिक निर्मातामध्ये एक भएकोले हामी अनुसन्धान, विकास र मार्केटि inमा अनुभवी छौं। मानिसहरूलाई 3D थ्रीडी प्रिन्टरहरूको आनन्द लिन मद्दत पुर्‍याउन, र हाम्रो एक्बुमेकर थ्रीडी फ्यानहरूको लागि प्रिन्टरहरू प्रयोग गर्न यो सुविधाजनक बनाउन, एक्बु मकर विश्वव्यापी डिलर, वितरक, र पुनर्विक्रेताहरूको खोजी गर्दैछ! देखि, हाम्रा ग्राहकहरूले सबै पेशा र कारोबारलाई कभर गर्दछ, जस्तै थोक व्यापारी, खुद्रा विक्रेता, शिक्षा व्यवसायीहरू, इत्यादि। यसले तपाईंको आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्ने इच्छा राख्दैन, वा तपाईंसँग थ्रीडी प्रिन्टरको बारेमा अन्य राम्रा विचारहरू छन्। यदि तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईं आफ्नै ब्रान्ड चलाउन राम्रोसँग अनुभवी हुनुहुन्छ। OEM सेवा उपलब्ध छ। यस क्षण हामीसँग सामेल हुन तपाईलाई स्वागत छ। अग्रणी अनुसन्धान र3डी प्रिन्टिंग को डिजाइन कम्पनी को रूप मा, हामी सँधै गुणस्तर लाई प्राथमिकता लिन्छौं, उच्च प्रदर्शनको साथ सबै भन्दा राम्रो प्रिन्टर बनाउनेमा ध्यान केन्द्रित गर्दछौं, र सबैको लागि सबै भन्दा राम्रो सेवा प्रदान गर्दछ। तपाईं सबै हाम्रो उत्पादन बेच्न स्वागत छ। हाम्रो लक्ष्य तपाईको भरोसालाई धन सम्पत्ती हुन दिनु हो। हामी एक जीत-जीत स्थिति प्राप्त गर्न र दीर्घकालीन सम्बन्ध निर्माण गर्न चाहन्छौं।
१. ब्राण्ड लाभ:
२०१ub मा स्थापित ईकुबमेकर थ्रीडी टेक्नोलोजीलेdडी प्रिन्टर अनुसन्धान, डिजाइन, र समग्रमा ट्रेड एकीकृत गर्नमा माहिर छ। थप रूपमा, EcubMaker प्रिन्टरको मूल्यांकन भिडियोहरूले YouTube मा सयौं हजार दृश्यहरू देखेका छन्। धेरै प्रोफेशनल थ्रीडी प्रिन्टिंग वेबसाइटहरूले हाम्रा प्रिन्टरहरूको अत्यधिक मूल्या have्कन गरेका छन्, हामीलाई केहि समयको उत्कृष्ट ब्रान्डको रूपमा मूल्या rated्कन गरिएको छ, जस्तै ग्याजेट फ्लो, रोबोटुरका, थ्रीडीपीसी डॉट इत्यादि।
२. टेक्नोलोजी र सेवा समर्थन
उच्च कुशल ईन्जिनियरहरूको इकुबमेकर आर एन्ड डी टोलीसँग प्रोफेशनल टेक्नोलोजी प्रदान गर्नको लागि फाइल गरिएको थ्रीडी प्रिन्टि inमा गहन टेक्नोलो अनुभव छ। यसैबीच, सर्वश्रेष्ठ बिक्री पछि सेवा पनि एक्बमेकर थ्रीडी विशेषज्ञहरूद्वारा प्रदान गरिएको हो। हामीसँग आफ्नै उच्च-गुणवत्ता पछाडि बिक्री सेवा टोली छ, "ग्राहक मामला" को अवधारणाको पालना गरी उच्च क्षमता, सुविधा र पारदर्शिताको एक मानकीकृत सेवा प्रणालीको साथ। अहिलेसम्म हामी हाम्रो पछाडि बिक्री समर्थनमा उच्च प्रतिष्ठाको कारणले हो। तिनीहरूको द्रुत प्रतिक्रिया र मैत्री सहयोग।
Quality. गुणस्तरको ग्यारेन्टी
हाम्रा सबै उत्पादनहरूले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर र वातावरणीय प्रमाणपत्रहरू पारित गरे जस्तै एफडीए, सीई, एफसीसी, र आरओएचएस, इत्यादि। हामीले कम्पनी भित्र तीनवटा लक्ष्यहरू राखेका छौं। सबै भागहरू परीक्षण गरिएको धेरै पटक यसलाई प्याक गर्नु अघि र हाम्रो अनुभवी गुणवत्ता नियन्त्रण टीम प्रत्येक प्रिन्टरको लागि लामो अवधिको परीक्षणमा गयो जुन सेलको सेट अप सुनिश्चित गर्नका लागि थियो। अन्तिम प्याकेजि section सेक्सनमा पुग्न प्रत्येक प्रिन्टरले प्रत्येक गुण नियन्त्रण परीक्षण पास गर्नुपर्दछ अन्यथा हामी यसलाई पुनः निर्माण निर्माण विभागका लागि पठाउँदछौं। बाकस उच्च गुणस्तरको स्टायरोफोमले भरिएको छ प्रिन्टरलाई उच्च विस्थापनबाट जोगाउनको लागि र यो शिपमेन्टको लागि तयार हुनु अघि धैर्यताको परीक्षामा पार गर्नुपर्नेछ। त्यसैले कोही पनि ढुक्क हुन सक्छ कि प्रिन्टरले कुनै पनि आन्तरिक यातायात द्वारा क्षतिग्रस्त बिना ठाउँमा पुग्नेछ।
Economic. आर्थिक मूल्य
हामी विश्वास गर्छौं कि हाम्रो प्रिन्टरहरू सबै वर्गका लागि छन्। हामी खास ग्राहक पक्षहरूको लागि कहिले पनि सोच्दैनौं। त्यसैले न्यूनतम लाभको हिसाबले मूल्यको बारेमा सोच्नुहोस् र प्रत्येक सेक्सनको लागि उत्तम सेवा दिनुहोस्। हाम्रा उत्पादनहरूको मूल्य हालै समान कोटी प्रिन्टरको वरिपरिको भन्दा सस्ता छ। हामी लामो समय देखि ब्यापार खोज्दैछौं, हामी नाफा को लागी मात्र विश्वास गर्दैनौं। एक्युबमेकरले आशा गरेको कुरा के हो भने सबैलाई थ्रीडी प्रिन्टि technology टेक्नोलोजीको बारेमा जान्न मद्दत पुर्‍याउँछ र उनीहरूको सपना वास्तविकतामा ल्याउन रमाईलोको आनन्द लिन्छ। थोक मूल्यको लागि हामीसँग सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस् यदि थोक खरीद आवश्यक छ। थोक खरीद सुविधाहरू र उन्नत आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन द्वारा, एक्बु मकरले तिर्नेहरूको नाफा सुनिश्चित गर्न उत्पादनहरूको लागत द्रुत रूपमा कम गर्दछ, ताकि अन्त प्रयोगकर्ताहरूलाई पैसा बचत गर्न मद्दत गर्न।
हामी तपाईंबाट के आशा गर्छौं?
You तपाइँले चाहानुभएको प्रिन्टरको बारेमा अझ राम्रोसँग समझ राख्नुहोस्।
Your हामीलाई तपाईंको व्यावसाय योजना र तपाईंको कम्पनीको बारेमा बताउनुहोस्।
Us मूल्यको बारेमा हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। जस्तो कि हामी सँधै तपाईंलाई सबैभन्दा बढी सम्झौताको मूल्य प्रस्ताव गर्दछौं।
Active हाम्रो ब्रान्ड र थ्रीडी प्रिन्टिंग कल्चरको सक्रिय रूपमा प्रचार गर्नुहोस्।
You यदि तपाईं ड्रपशिपिंगमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न धेरै ईमानदार छौं।
यहाँ लेख्नुहोस्: Sales01@zd3dp.com
यो ईमेल भएता पनि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईको बारेमा हामीलाई बताउन स्वतन्त्र छ र हामी कसरी दीर्घकालीन व्यापार सम्बन्ध विकास गर्न सक्छौं। हामी तपाईंको ईमेलको प्रतीक्षा गर्दैछौं। हामीले जवाफ पाउने बित्तिकै तपाईं जवाफ पाउनुहुनेछ। तपाईको समयको लागि धेरै धेरै धन्यबाद।